Namuhla, ezidumile ikakhulukazi kukhona amaphilisi okubangela lokuzalwa. Le ndlela ngokuvamile ziphendukela-genikologa odokotela. Amantombazane amaningi unesithakazelo kanjani le ndlela ye stimulation kuyingozi futhi kungaba ekhiqizwa okwesikhathi yilutho empilweni. Lokhu nokunye okuningi ungathola ku-athikili yethu.
Izimpawu I-lokungeniswa zomsebenzi
Zokubeletha - inqubo yemvelo empilweni yanoma yimuphi owesifazane. Kukhona amacala lapho kungekho kokungenela yezokwelapha futhi lokungeniswa zomsebenzi lubaluleke. Yingakho omama abaningi banesithakazelo kulokho amaphilisi ukuba azalwe esibhedlela nokuthi siba yingozi empilweni yengane.
Udokotela wakho angase asikisele ukushukuma lokuzalwa, uma isiguli izinkomba salokhu inqubo:
kungekho Kufinyeta emva osenyameni-amniotic fluid,
khona izifo ezingathi sína kwababhemayo ezingamahlalakhona;
nokukhulelwa izingane eziningi ngasikhathi ;
Konke lezi zimpawu nalapho engekho kokungenela uchwepheshe ungakulimaza hhayi kuphela we obelethayo, kodwa futhi ingane yakhe.
Ngokuvamile, odokotela batusa nisebancane lokuzalwa ukushukuma esimweni isimo fetus liwohloka. Ngokuvamile ochwepheshe singaphoqi Ukubeletha.
Kuyaphawuleka ukuthi amaphilisi ukuba azalwe, ingase ikhishwe kuphela kadokotela. Lokhu akusona isimanga, ngoba eziningi Izimo. Kufinyeta eyayenziwe ngamabomu benamandla kakhulu futhi kubuhlungu lokho kunokuba zemvelo. Lihambisana ngamaphilisi ntombazane zabasebenzi, onguchwepheshe compulsorily ukhethe izinto zokubulala izinzwa.
Izimo le lokungeniswa yokufakelwa zomsebenzi
Kasibili iyiphi inqubo yezokwelapha enezinto eziningi Izimo. lokungeniswa Artificial zomsebenzi iyathinteka. Kuleso simo, uma omama nokukhulelwa odlule kwadingeka section caesarean, amaphilisi ukuba azalwe, it is contraindicated. ukushukuma yokufakelwa kungaholela uqhekeko emalungeni ubudala.
Artificial lokuzalwa ukushukuma is contraindicated esimweni uma i-fetus iyakwazi usayizi esikhulu, eyeka ukukhula nokwakheka kwalo, kanye uma kukhona sikashukela ukhulelwe, ukopha intrauterine, abruption esinomhlapho noma isifo esithathelwanayo kwesibeletho. Ephambi kwezinduna okungenani omunye izimpawu ngenhla zomsebenzi lokungeniswa is ayizange inikezwe.
ulwazi olujwayelekile mayelana belungiselela lokungeniswa zomsebenzi
Tablets, ebiza izizukulwane, aqukethe ukubunjwa yabo antigestagens eyayenziwe kwemiqondo. Le mithi uvimbe abanye izinqubo intrauterine. Ama-hormone eziqukethwe yokwakheka amaphilisi kungaholela ekwakhiweni esasizosheshisa zomsebenzi. Isiza ukudalulwa wesibeletho.
Ngaphambili amaphilisi ezibangela wazalwa kungakabi isikhathi, esetshenziselwa zokuvimbela inzalo eziphuthumayo emva kokukhulelwa. Le mithi zaziwa ngokuthi abortifacients.
Kungenxa yalesi sizathu, abesifazane abaningi bakholelwa ukuthi amaphilisi abe nomthelela ongemuhle ingane. Ngaphambi lapho kwemukelwa khona ukulungiselela enjalo kuyadingeka ukuba uthintane onguchwepheshe.
Ethandwa kakhulu eminyakeni yamuva abe ithebhulethi, ebiza izizukulwane. "Mifepristone" Isidakamizwa oyisilomo besifazane abaye Kunconywa ukushukuma yokufakelwa zomsebenzi.
"Mifepristone" - eyisidalwa esinenkululeko zokwenziwa ukuthi akanawo umsebenzi progestin. Isetshenziselwa hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa lokungeniswa zomsebenzi, kodwa futhi ukuba ukuphazamiseka sokukhulelwa ekuseni futhi eziphuthumayo zokuvimbela inzalo. Ngaphansi isenzo zomuthi ivinjiwe progesterone receptor. ukungena kwakhe emzimbeni kuvusa ukuxoshwa esibelethweni ezingadingekile esibelethweni.
10 angu zomuthi yaphathwa umcimbi ukuthi emahoreni angama-48 sobuhlobo bobulili olungavikelekile, futhi kukhona ingozi ukukhulelwa okungafunwa.
Ochwepheshe wazi ukuthi ukusebenza kwe "Mifepristone" kuyinto 99%. Lesi sidakamizwa kuvimbela indawo iqanda eselivundisiwe ogangeni lesizalo. Ukuze ubone ukuthi lesi sidakamizwa wasebenza noma cha, kufanele uvakashele udokotela wezifo zabesifazane izinto futhi iphumelele ekuhlolweni noma ulinde menses. Kufanele beze kungakapheli izinsuku ezintathu emva kwemukelwa i- "Mifepristone".
200 noma 600 angu zomuthi kungenziwa udokotela uma kwenzeka ukuthi isiguli ukukhulelwa okungafunwa amasonto 42 futhi ufuna ayibulale ngokusebenzisa imithi. Ngempumelelo kuyinto 98%. Kumele kuqashelwe ukuthi le ndlela akuyona neze into engenakwenzeka uzikhandla ekhaya. "Mifepristone" kuphakamisa ukufa fetus. Le ndlela ayahluleka akuhileli eziyingozi e abesifazane.
200 angu zomuthi engahle inqunywe wumgomo uma kwenzeka ukuthi owesifazane okhulelwe Kunconywa ukusebenzisa indlela lokungeniswa yokufakelwa zomsebenzi. Kukholakala ukuthi amaphilisi ukuba azalwe, kuze kudlule isikhathi eside ningathwali ingozi empilweni kanye impilo kamama nengane. Nokho, zikhona izimo eziningi lapho it is izidakamizwa ziye zaholela eziyingozi.
Nokufa emva ukuphuza amaphilisi ezibangela lokuzalwa
Namuhla, cishe wonke umuntu wesifazane uyazi ukuthi amaphilisi ukuba azalwe. Lokhu akusona isimanga, njengoba amiswa ukuba ningabi nje kuphela omama abasanda esikhathini sakamuva, kodwa futhi amantombazane ocansini olungavikelekile iphutha, noma kukhona abakhulelwe bengahlosile. Kukhona izimo eziningi lapho ukusetshenziswa izibhebhe ezinjalo kwaba imbangela yokufa.
Ngo-September 2001, owesifazane wafa ngemva kwesonto ngemuva ukwamukelwa "mifepristone". Okwamanje imbangela yokufa kwaba ukushaqeka ukonakala, okuyinto kwabangelwa lesizalo ukutheleleka.
Septhemba 12, 2001 I-United States umhlali wafa ngemva Ukwamukelwa "mifepristone" izinsuku 5. Bekanalo ukhulela ethunjini. Kuyaziwa ukuthi Kulezo zimo, ukukhuthazwa bokubeletha akuvunyelwe. Okwamanje imbangela yokufa kwaba ukunganaki odokotela abangazange ngokushesha uqaphela ethunjini kwengane esiswini. Lapho owesifazane efika ekhaya ngemva wezokwelapha inqubo isisu, waqala ubuhlungu eqinile futhi ukopha kakhulu. Yena ngokuphindaphindiwe ngokuthi udokotela wakhe, kodwa wagomela ukuthi izimpawu zemvelo. Ngemva kwamahora ambalwa walaliswa esibhedlela futhi Ngahlinzwa, kodwa yena wabulawa uqhekeko tube fallopian.
Ehlobo 2003, isakhamuzi Sweden, ushone ngenxa yokukhishwa kwezisu wezokwelapha. Wazamukela ukunakekelwa ngezokwelashwa ezanele. Lo chwepheshe wamtshela amaphilisi athile imbangela lokuzalwa futhi kanjani uwathatha. Kwesonto ngemuva ukuhlolwa wamthatha "Mifepristone". Ngemva kwezinsuku ezimbalwa yena uphumile Yokuqashwa elinye izidakamizwa. Ngemva ukwamukelwa yayo nge le ntombazane iqala nezinhlungu ezinzima kanti ukopha esindayo. Esibhedlela, wayeselahlekelwe ukujovwa nge isidambisa-zinhlungu futhi banginikeza usizo lokuqala. Ngemva kwezinsuku 6 isidumbu sakhe satholakala ku eshaweni. Imbangela yokufa - ukopha.
Ukuzalwa emva izidakamizwa ukushukuma
Omama abaningi abalindele unesithakazelo kusengaphambili, onikeza amaphilisi ntombazane zabasebenzi. Akukhona ngengozi, kwaziwa ukuthi ukushukuma yokufakelwa kuthinta inqubo kokubeletha.
omama abanolwazi ababezama out on ngokwakhe amaphilisi ibangele umsebenzi lokuzalwa, aveze ukuthi ngaphansi kwethonya inqubo umuthi ungakhululekile ngaphezulu, ngesikhathi esifanayo ngikhathazeke.
we isikhathi sokulungiselela. Izici isicelo
Amantombazane amaningi unesithakazelo, bangaki izenzo ithebhulethi, ebiza izizukulwane. Bambalwa abantu bazi, kodwa izidakamizwa izenzo umuntu ngamunye. Isikhathi ngemva kwalokho zizosebenza kuxhomeke ezicini eziningi umama ikusasa emzimbeni. Noma kunjalo, kukhona ngokwesilinganiso - amahora angu-24.
Esimweni lapho ithebhulethi yokuqala yayingakuthinti, kubalulekile ukuthi uphuze usuku kamuva wesibili. Kuyaphawuleka ukuthi udinga ukusebenzisa izidakamizwa kuphela ngaphansi kokuqondisa onguchwepheshe. Uma izidakamizwa akusebenzanga okwesibili, ngaleso sikhathi udokotela ekunika imithi enamandla.
abesifazane abaningi bayazi ukuthi kukhona iphilisi esibangela lokuzalwa. Izibuyekezo bokubeletha abanokuhlangenwe nakho bangabasiza ukuba omama abakhulelwe ukuba uthole ukuthi le ndlela ye stimulation kuyingozi. Ngo izibhebhe ezinjalo, abesifazane abaningi ukubona izimfanelo kuphela. Bathi yezidakamizwa ithinta umzimba ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Kunezinto eziningi zokubeletha abanolwazi, okuyinto abathi ukuthi imithi awazange asize. Ngenxa yalokho, kwadingeka iphendukele indlela kwesigaba cesarean. Ngaphezu kwalokho, bakholelwa ukuthi izidakamizwa kuyingozi kakhulu hhayi nje kwabesifazane kodwa futhi izinsana. Abanaso ukuncoma okwenziwe zishukumisa zabasebenzi.
Njengoba ubona, zonke izibuyekezo ezahlukene. Othile ithebhulethi efanelekayo, okubangela lokuzalwa esibhedlela, kanti ezinye azikwenzi lokho. It is ngenxa yalesi sizathu, lokhu izidakamizwa kufanele libekwe kuphela udokotela.
Imiphumela engemihle amaphilisi ntombazane zabasebenzi
Akusiyo imfihlo ukuthi yimuphi izidakamizwa has nemiphumela engemihle. Lapho ukushukuma yokukhulelwa okhulelwe angase ukuzwa ikhanda elibuhlungu, isicanucanu, ubuthakathaka, ukucobeka, isiyezi, futhi ubuhlungu besisu. Sincoma kakhulu ukuthi wena ngokucophelela ukufunda ulwazi mayelana amaphilisi ngaphambi kokusetshenziswa yabo. Ukusebenzisa kwabo kungenzeka kuphela ngaphansi kokuqondisa onguchwepheshe.
Ukuze amantombazane amaningi, i umbandela ebalulekile lapho ukhetha indlela ukukhuthazwa sokukhulelwa - kungenye yezinkinga zamahhotela. Inani amaphilisi ukuthi kusheshiswe imisebenzi ejwayelekile, kuyinto ruble ecishe ibe yizinkulungwane 2 per 200 amagremu.
Okufakiwe "mifepristone" intombazane abiza ruble 1000 ngayinye esinye isibhebhe sibonisa. Umuthi uba nombala ukukhanya yellow. Shelf ukuphila iminyaka emithathu.
"Mifepristone" okuphikisana eshibhile - "Mizopristol". Kuyinto ayisasebenzi. Izindleko "Mizopristola" kuhluka ruble 300 kuya 1,950. Umuthi ikhishwe kuphela kadokotela. Impilo akuyona iminyaka engaphezu kuka-2.
Enye Analogue - "Penkrofton". Inani layo zokhahlamba kusuka 1500 kuya ku-ruble 3000. Thenga ke ekhemisi kuphela uma une kudokotela. Kuyaphawuleka ukuthi izidakamizwa ingatholwa endaweni WaseRussia.
Lokungeniswa zomsebenzi ekhaya
Ezinye Amantombazane acabanga ukuthi amaphilisi ukuba azalwe, enobungozi kakhulu empilweni. Njengomthetho, laba besifazane abakhulelwe ngizibuza indlela ungakwazi asheshise imisebenzi ejwayelekile ekhaya ngaphandle imithi.
Ethandwa kakhulu ngempumelelo endleleni ntombazane zabasebenzi - kuyinto ngocansi. Kuyaphawuleka ukuthi umbandela oyinhloko le ndlela - ithola isidoda e yomzimba wowesifazane. Kungenxa isidoda indoda liqukethe prostaglandins. Bathuthukisa umsebenzi contractile kwesibeletho.
Ukuze lokungeniswa zomsebenzi ekhaya, abesifazane abaningi kudle fruit cocktail. Lihlanganisa ingilazi orange juice e inani elilingana lamanzi esiphethu, futhi 2 wezipuni zamafutha ocolisekileyo nama-alimondi.
Sincoma kakhulu baphendukele lokungeniswa zomsebenzi ekhaya. Izenzo ezinjalo zingase zilimaze hhayi kuphela owayesanda kuzalwa, kodwa futhi abelethe.
Muva nje, ezidumile ikakhulukazi kukhona amaphilisi okubangela lokuzalwa. Abanye kubathatha ebekiwe yabo udokotela, futhi othile wanquma hambisa esiyingozi kanjalo ngokuzimela. Sincoma kakhulu ukuthi awazi ukusheshisa imisebenzi ejwayelekile ngaphandle ukwabela specialist kanye ekhaya. Hlala uphilile!
Of napkins ukuthi kungenziwa? nemibono
Indlela yokwenza umshini izinkuni ingane yakho
Indlela ukupheka i omelet eziphuma kuso? Recipe ne isoseji nezincazelo zayo ezihlukahlukene
Kubhayela Electric for amalahle indlu (50 square metres): Uhlolojikelele, izici, izici Ukukhetha nokufakwa